Best Holidays Canal Ke River Boat EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Best Holidays Canal Ke River Boat EYurophu
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 26/09/2020)
Abahambi Ndikhangela Best Canal kunye River Boat Holidays eYurophu aphumle lula ukwazi iYurophu izinto kakhulu. kunjalo, ukwazi apho aye kufuna abahamba best iholide nanini, kufuneka wenze uphando. Kukho amazwe emihlanu emisele fantastic iinketho wayehamba iholide.
Uyakwazi ukuya kubo bonke, okanye ukhethe lowo okuthanda kakhulu. Yintoni esiqiniseke ngayo ukuba izinto ziza kuba ezinye lomsele kunye umlambo ekhwela edumileyo ngezi holide. Nazi kakuhle lomsele kunye usiya ngeeholide eziphezulu ezintlanu eYurophu:
1. Canal and River Boat Holidays ku Fransi
France lilizwe elihle kunye kwiindawo ezininzi kunokwenzeka ukuba ijelo okanye wayehamba iholide. A ezimbalwa kwimimandla yaseFransi kuma ngaloo mba: i Midi, kummandla Aquitaine, kunye Camargue. Ngamnye kubo uneempawu ezizodwa.
Owokuqala Canal du Midi, a World Heritage Site kwaye umzila endala ngumntu eYurophu elisekho ilandela indlela yayo yoqobo. Lo msebenzi Pierre Paul Riquet yagqitywa 1681. Apha endleleni, ingami phantsi i Midi, ungabona Le Somail and Carcassonne, neendawo ezimbini ephakathi umtsalane. Ukuba umthanda Ukutya okuhle yaye iwayini enkulu, unga zama Minervois odumileyo Midi kunye Corbieres, kunye cassoulet, a uju lendawo.
Southern France kaThixo Camargue kakhulu kancinci mihla, kunye nemozulu entle enelanga kwaye ngokusondela kulwandle iMeditera. Ngeli thuba owayehamba Camargue, uyakwazi ukufunda uhlobo uhlaza kunye Birdlife. Yintoni egqithisile, kwiindawo ezisezidolophini kukwakho kangako cafes ebukekayo ukubona.
Ekugcineni, Aquitaine uya kusithimba intliziyo yakho njengoko Cruise ezigodini yayo emnandi, jonga seengxangxasi zayo namawa ndijonge. Kukho inkitha iindlela ukuba, kuquka ukuhamba phantsi i River Charente. in France, yonke indlela onokuzenza ingane, kwaye lona ngokupheleleyo yimvakalelo emangalisayo.
2. Canal and River Boat Holidays ku ElamaTaliyane
Xa ucinga lamajelo kunye Italy, into yokuqala ethi qatha engqondweni yakho Venice. Le ichweba yelo xesha likhulu, besika anemijelo, kwaye inikeza amava eyahlukileyo abahambi abathanda Ukuhamba. Kodwa ngaphezu bamfimfithe nemijelo yaseVenice ngokwayo, unxweme Italian i bonisa ngokwayo.
ukuze Yokuqala, ungatyelela kwiziqithi ingane Torcello, Burano, kunye okuhlola ukuba ube eninzi ukunikela. Ukuba uyafuna, uchitha ixesha kwenye yeevenkile zabo ezininzi specialist. Ukuba akukho njalo, ungasoloko uhamba kwisixeko yaseVenice ngokwayo. Yonke umzila yeyona entle apho, ingakumbi xa sezulu sisihle. Hambisa kwi River Brenta okanye Sile River for ngokhenketho ezininzi ezibukekayo i Italian emaphandleni.
Italy kaThixo elininzi ukunikela imilambo yawo entle, kunye nemijelo yaseVenice i kufuneka-ukubona. Ukuba ufuna ukubona ezona izinto yaseYurophu yamanzi olugqibeleleyo, uya kubafumana in Italy.
3. Canal and River Boat Holidays ku Jemani
Germany ukuze abe kwindawo yokuqala Ucinga xa umsele zibhetele nangeeholide usiya eYurophu ayavela. kunjalo, eli lizwe kude oswele yamanzi amahle ukuhlola. iingingqi ababini bemi ngaphandle kwabanye: Mecklenburg and Brandenburg, zabo esimnandi imisele kunye namachibi singqongwe amahlathi aluhlaza.
Yintoni ikakhulu ebukekayo kukuba endleleni ungabona izigodlo emangalisa, iinqaba ephakathi, kunye needolophu ubudala elidala. Yaye abo bathanda indalo ngokungathandabuzekiyo uya kunandipha entlango ezinobuhle nobutyebi zasendle.
Berlin ngokwawo kwo ngaphezu enza Venice, kwaye phantse 100 imisele ukuba ukuhlola. kunjalo, emseleni wakho German kunye adventure yeholide usiya nazo ukuthatha ukuya Potsdam and Brandenburg. Ungaphoswa ithuba lokuhlola Germany ngale ndlela owahlukileyo lomse-.
IBelgium inebhonasi enhle kwicala layo xa isiza kweyona mijelo iphambili kunye neeholide zokuhamba ngeenqanawa eYurophu. Le bonus lo mmandla Flemish kunye nobuhle nemifula bayo. Nangona misele Belgian azikho yemveli ngengqiqo yokuba amadini kwindawo oluhle zasemaphandleni, ngokuqinisekileyo angakusa kwezinye iindawo umdla.
Umzekelo, Bruges ngempela ukutyelela, nokuphononga it imisele yenza i uhambo nokuba kumnandi. Kukho ukuthandana okuthile emoyeni kweBruges, ngokufanayo neVenice. Kwaye ke izakhiwo ebukekayo ephakathi kunye chocolate shops dibanisa kuphela emoyeni.
Ngoko kukho Ypres, indawo eyothusayo ezele ezibalulekileyo ezimbalini kunye izinto ezikhethekileyo Flemish, izandi, nencasa. Ukuhamba indlela yakho emnandi Belgian iitshokolethi ngesandla, okanye ukhombise ngamandla Beers Belgian. Eli lizwe ndiya kunamkela kunye uyoliswa olumsulwa zonke izivamvo.
Akukho uluhlu lwe kakhulu kwiindawo European kuba ngokupheleleyo ngaphandle Netherlands. Oko kuquka zokufikela afundisa iiholide best itshaneli kunye wayehamba eYurophu. Kwilizwe imijelo yamanzi kwafuneka ukufumana indawo yayo kuluhlu, ngenxa izimvo zalo mihle, imizila ebukekayo kwaye lula nokuthula losuka.
Emaphandleni Dutch yamanzi zayo idini amava enkulu. Mhlawumbi ayikho enye indawo enokuqhayisa ngokuhamba ngeenyawo okunjalo iilali ezincinci kwaye ecaleni kwezinto ezininzi ezintle. Khawube bedlula ngokukhangela zemveli- iphendukile Dutch, kunye ukubonakala kwazo liyabonakala nomtsalane. Khawube nomfanekiso ujonge amahle kwaneso kwi impepho xa edlula kummandla Frisian.
Ukuceba iphenyane Ikhefu eYurophu? Incwadi Yakho Ukuqeqesha Tickets nge Gcina A Train and enjoy!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#canal #riverboat #uhambo europetrains eurotrip trainjourney